Acoustic Panels ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
Acoustic Panels ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။
ကြမ်းခင်းသစ်သားကဲ့သို့သော indoor အသံအကန့်များ ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။အသံအကန့်များဖောက်ထွင်းခံရသော သစ်သား အသံစုပ်ယူသည့် အကန့်များ၊ အထည်ပျော့ ထုပ်ပိုးထားသော အသံစုပ်ယူသည့် ပြားများ၊ polyester ဖိုင်ဘာ အသံစုပ်ယူသည့် ပြားများ၊ သစ်သားသိုးမွှေး အသံစုပ်ယူသည့် ပြားများ၊ အသံ ကာရံပစ္စည်းများ၊ အသံ ကာရံထားသော စောင်များ စသည်တို့
1. အစင်းကြောင်းရှိသော သစ်သား အသံအကန့်များ ဘုတ်အား ကျောဘက်တွင် အပေါက်များနှင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပေါက်များပါရှိသော acoustic မူအရ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတွင် ဆူညံသံများကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အသံစုပ်ယူမှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာရပ်များ ရှိပြီး အလယ်အလတ်နှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော အသံစုပ်ယူမှုအတွက် အထူးထိရောက်သည်။ အသုံးပြုသည့်ကုန်ကြမ်းများအားလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအဆင့်နှင့်အညီဖြစ်ပြီး၊ ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပြီး ထုတ်ကုန်များတွင် သစ်သားရနံ့လည်းရှိသည်။
2. ဖောက်ထွင်းထားသောသစ်သားအသံအကန့်များဘုတ်အဖွဲ့တွင် သိပ်သည်းဆမြင့်သောဘုတ်၏ နောက်ကျောနှင့် နောက်ဘက်တွင် cylindrical အပေါက်များအားလုံး ရှိသည်။ ကျောထောက်နောက်ခံပစ္စည်းသည် လေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့်အတူလည်းကောင်း၊အသံအကန့်များထုတ်လွှတ်သော အသံများကို ချေဖျက်နိုင်ပြီး စုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းကို သိပ်သည်းဆမြင့်သော ဘုတ်၏ နောက်ကျောတွင် စုစည်းထားသည်။ အသံစုပ်ယူမှု၏နိယာမမှာ ကုန်ကြမ်းအတွင်းတွင် သေးငယ်သောချိတ်ဆက်မှုရှိသော ပေါက်ကြားပေါက်များစွာရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အသံလှိုင်းကြိမ်နှုန်းသည် ကုန်ကြမ်းအတွင်းတွင် ဤအပေါက်များနှင့်အတူ နက်ရှိုင်းစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အသံကို စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကုန်ကြမ်းနှင့် ပွတ်တိုက်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။ အသံစုပ်ယူသည့်ပစ္စည်း၏ porous structure ၏ အသံစုပ်ယူမှုအင်္ဂါရပ်မှာ အကြိမ်ရေတိုးလာသည်နှင့်အမျှ အသံစုပ်ယူမှုညွှန်းကိန်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာကာ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အစာခြေခြင်းနှင့် စုပ်ယူမှုတို့သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အစာခြေခြင်းနှင့် စုပ်ယူမှုတို့ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံမျိုး၏ အသံစုပ်ယူမှုနိယာမမှာ သတ္တုပါးလွှာသော ပန်းကန်ပြားများ၏ အသံစုပ်ယူမှုဖြစ်သည်။ သဘာ၀ ကြိမ်နှုန်းတွင်၊ သတ္တုပြား၏ ပြင်းထန်သော တုန်ခါမှုကြောင့် အသံအများအပြားကို ကြေညက်စေပြီး စုပ်ယူပါသည်။
3. Fabric အသံအကန့်များ များသည် ရွေးချယ်ရန် veneer အထည်များ၏ အရိပ်နှင့် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အမြဲရရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူသူများသည် Veneer အထည်များကို ပြသနိုင်ပါသည်။ Fabric အသံအကန့်များ တွင် မြင့်မားသော အသံစုပ်ယူနိုင်သော Band ပါရှိပြီး ကြိမ်နှုန်းနိမ့်၊ အလယ်အလတ်နှင့် မြင့်မားသော ဆူညံသံများအပေါ် ကောင်းမွန်သော အသံစုပ်ယူနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတွင် မီးမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့် မီးဘေးကင်းရေး၊ ဖုန်မှုန့်များထုတ်လုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊ ခိုင်ခံ့သော အလှဆင်အနုပညာနှင့် ရိုးရှင်းသော အင်ဂျင်နီယာတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။
4. Polyester ဖိုင်ဘာအသံအကန့်များအလှဆင်အကန့်များသည် အသံစုပ်ယူမှု၊ ဆူညံသံလျှော့ချရေး၊ ဆူညံသံလျှော့ချရေး၊ အပူလျှပ်ကာ၊ အပူလျှပ်ကာစသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိသည်။ ပစ္စည်းသည် အချိုးကျကောင်းမွန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ductility၊ ductility၊ wear resistance၊ impact resistance၊ လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေ။ မြေပြိုခြင်း ၊ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းရှိ သတ္တုချပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တုန်ခါမှု အသံစုပ်ကိုယ်ထည်အပေါ် ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး ကျယ်ပြန့်သော စခရင်ပါရှိသော ထိရောက်မှုမြင့်မားသော အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယခင်အလွှာပေါင်းစုံဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ရေမြှုပ် သို့မဟုတ် ဖန်ဖိုက်ဘာတို့ကို အစားထိုးသည့် acoustic ပစ္စည်းအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ ဖျက်စီးရလွယ်ကူပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စနစ်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော:အထည် acoustic panel ၏ဝိသေသ
နောက်တစ်ခု:Acoustic Panels များကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။